कैलाश पर्वत उचाल्ने रावणले किन उठाउन सकेनन् पिनाक धनुष ? - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
कैलाश पर्वत उचाल्ने रावणले किन उठाउन सकेनन् पिनाक धनुष ?
आम मानिसले सोच्छन्, कैलाश पर्वत उचालेको लंकाधिपति रावणले आखिर शिव धनुष किन उठाउन सकेन ? र रामले कसरी उचाल्न सके ? यो कुरा जान्न चाहने धेरै छन् ।
यस्तो थियो धनुष
महादेवको धनुष धेरै नै शक्तिशाली थियो र चमत्कारीक पनि । शिवले जुन धनुष चलाउँथे त्यो धनुषको टंकारले नै बादल फाट्थ्यो र पर्वत हल्लिन्थे । यस्तो लाग्थ्यो कि, भूकम्प गएको हो ।
यसको एक तीरले नै त्रिपुरासुरका तीन नगर भष्म भएका थिए । यो धनुषको नाम थियो पिनाक । देवी र देवताको कालको समाप्तिपछि यो धनुष देवराज इन्द्रलाई दिइएको थियो ।
देवताले राजा जनकका पूर्वज देवराजलाई दिए । राजा जनकका पूर्वजमा निमीका जेठो छोरा थिए देवराज । शिव धनुष उनकै धरोहर स्वरुप राजा जनकसँग थियो । उनको यो विशालकाय धनुषलाई कोहीसँग पनि उठाउन सक्ने सामर्थ्य थिएन । तर भगवान रामले यसलाई उठाए ।
रावण एक अहंकारी मनुष्य थियो । उसले कैलाश पर्वत उठाउन सक्थ्यो तर धनुष उठाउन सक्दैन थियो । धनुष त उसले हल्लाउन पनि सकेन । धनुष उचाल्न उ एक अहंकारी र शक्तिशाली घमण्ड लिएर गएको थियो । रावणले जति शक्ति लगाउँथ्यो धनुष त्यति नै गह्रौं बन्दथ्यो ।
उ आफ्नो अहंकारले हारेको थियो । तर श्रीरामले त्यहाँ गएर पहिला धनुषलाई प्रणाम गरे । त्यसपछि निर्मल र शाीन्तले उचाल्न सफल भए । सीता भगवान शिवको प्रार्थना गरेर सहजै धनुष उठाउँथिन् । त्यसै प्रकारले रामले पनि प्रयास गरे र त्यसमा सफल भए ।